နေပြည်တော် မှာ ၈ ရက်ကြာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Local Guides » နေပြည်တော် မှာ ၈ ရက်ကြာ
နေပြည်တော် မှာ ၈ ရက်ကြာ
Posted by Mလုလင် on Feb 28, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 28 comments
ဒီလပိုင်း မှာ ခရီး အထွက်များပြီး ဓာတ်ပုံ အရိုက်ကြဲသွား တာကတော့ ကျွန်တော့ အတွက် အံ့သြစရာ ပါပဲ။ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာရိုက်တဲ့ ပုံတွေကလဲ ရှုပ်နေတယ်။ ၈ ရက်လောက် ကြာအောင် သွားနေ ပြီး ခလုပ် အချက် ၂၀ပြည့်အောင် မနှိပ်ခဲ့ ရတဲ့ ဒီခရီးကတော့ အမှတ်တရပါပဲ။
ဟိုး တစ်နေ့က က စံနစ်လား ဗီဇ လား ဆိုတဲ့ ပိုစ့် (ပြန်ရှာချင်ပြီး အတိအကျ ရေးပေးလို ပါသော်လည်း … ကွန်နက်ရှင်က မျက်နှသာမပေး) မှာ သပြေကုန်းဈေး က နဲနဲ ပိုသန့်တယ်လို့ မန့်ခဲ့ မိပါတယ်။ အဲဒါလေး သက်သေ ထူတဲ့ အနေနဲ့ ရိုက်ထားတာ လေး ရှဲ လိုက်ပါပြီနော့…
နေပြည်တော် OoPaThataNetYa စေတီ အတွင်းပိုင်း
ပန်းတင် ရွာ က ရှေးအိမ်. နေပြည်တော် နဲ့ သာဝထိ ကြား
ပန်းတင် ရွာ အရှေ့ ဘက်စိုက်ခင်း မှာ
ရွာထဲ ထဲထဲဝင်ဝင် လျှောက်သွားလျှောက်မေးမိတော့မှ ပဲ .. အမငှီး ရန်ကုန် မှာ ဘီယာဝိုင်း တစ်ဝိုင်းစာ က သူတို့ စီမှာ တစ်လ စာနီးပါးဖြစ်နေပါပကော. 60 သားကြက်တစ်ကောင် ကိုမှ ၂၀၀၀ ပဲ ပေးရတယ်။ ပန်းတင် မှာ အထက်တန်းကျောင်းမရှိလို့ သာဝထိ နဲ့ ရေနီကြားမှာ ကျောင်းသွားတက်ကြရတယ်။ အသားအပြန် ၂ နာရီ နီးပါး လမ်းလျှောက်ကြရတယ်။
အခု ခရီးကတော့ လက်ဆော့ တတ်တဲ့ Mလုလင် တစ်ယောက် .. ရွာပတ် ပြီးပြန်ခဲ့ရတဲ့ အမှတ်တရ ပါပဲ။ အရင် တစ်ခေါက် မန်းလေး တက်တုန်းကတော့ ရိုက်လိုက်နှက်လိုက်ရတာ.. ဦးလေး နှစ်ယောက် နဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက် ရေ .. ကျေးဇူးပါနော့ ..
ရန်ကုန်မှာ ရွှေတိဂုံ အစစ်ကြီး ဘုရားပွဲတော်လုပ်ပါတယ်ဆိုမှ
နေပူတော်ကြီးသွားပီး ရွှေတိဂုံ အတုဂျီး ရိုက်လာတယ်……
ရိုက်ပြီး တင်ရမှာ အားနာလို့ပါဗျာ။ စိတ်လဲနာဒယ်။ ရွှေတိဂုံ ဆိုင်ရာဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ ဆုရ ဓတ်ပုံ တွေကြည့်ပြီးပြီလား … လုံးဝ စိတ်နာဒလယ် ….. (တစ်ပုံ ပဲ ကြိုက်တယ်…)
ဒါဆိုရင် နာတိပြီ ……….. ဘာကြောင်း ဆိတ်နာတာ
သပြေကုန်းဈေးရဲ့ တတိယပုံမှာ လူတစ်ယောက် အမှိုက်တွေကျုံးနေတာ ထင်တယ် ….။
အမှိုက်ပစ်တဲ့ လူနဲ့ ၊ အမှိုက်ကျုံးတဲ့လူ … အချိုးစား အတော်ကွာပြီး သူများမလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လုပ်ကို လူပီသသလုပ်နေတာလေး လျှပ်တပြတ်ရိုက်ထားတာ… ထိထိမိမိရှိလှပါတယ် ။
အခကြေးငွေယူပြီးပဲ အမှိုက်ကျုံးကျုံး ၊ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ပဲ ကျုံးကျုံး မြင်ရတာတော့ ကျေနပ်စရာကောင်းတယ် ။
ပန်းတင်ရွာက ရှေးအိမ်ဆိုတဲ့ ပုံမှာလည်း …ရှေး မြန်မာတွေ နည်းပညာပိုင်းသာ အားနည်းချင်အားနည်းမယ် … သယံဇာတတော့ မဆင်းရဲဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း ထင်သာမြင်သာ ရှိလှပါတယ် …. ။ သစ်ပင် ပင်စည်လုံးလိုက်ဖြတ်ပြီး …အိမ်ထောက်တိုင် ဆယ်တိုင်ကိုမြင်ရလို့ပါပဲ …. ။ အဲ့ဒီသစ်က … ဘာသစ်များပါလိမ့် …. ။
ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ ကွိ ကနဲနေအောင် မိတော့တာပဲ ..။ အဲ့အမှိုက်ကျုံးနေတဲ့လူက ဈေးသည်ပဲဗျ. သူတို့က အလယ်တန်း မှာရောင်းတဲ့လူတွေပေါ့။ ကိုယ့်အမှိုက်ကိုယ်ရှင်းရင်း သူ့ နားက အမှိုက်တွေပါ ရှင်းပေးနေတာပါ။ အဲ့မှာ စည်းကမ်းဆိုတာ လေးသွားတွေ့လို့ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် ကလူတစ်ချို့ စည်းကမ်းမဲ့တာ မြင်တာနဲ့ လူမျိုး တစ်မျိုးလုံး စည်းကမ်းမဲ့တယ် လို့ တွေးမိသွားရင် .. အတွေးခံရရင် မတန်ဘူးလားလို့ …….
ပန်းတင်ရွာ မှာ ၂၈ ၀ိုင်းလောက် ရှိတဲ့ အထဲက .. ၁၃ ၀ိုင်းလောက် က ကျွန်းအလုံးလိုက် နဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ရှေးအိမ် တွေနဲ့ နေကြပါတယ်။ အဲ့ရွာမှာ မူလတန်း အတွက် ဘုန်းတော်ကြီး စာသင်ကျောင်းလဲ ရှိပါတယ်။ ခနော်နီခနော်နဲ့ ပေါ့လေ…။ အဲ့မှာက သစ်ပေါ တော့ သစ်နဲ့ ဆောက်ကြပြီး လှိုင်ကော် အကျော် ဟိုး ဘက်ကျတော့ အုတ် နဲ့ ကျောက် ပေါတော့ တော်တော် များများ တိုက်ခံ အိမ်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန် ကြရော။ (သစ်မခုတ်ရ .. အမိန့် ကြောင့် လဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့.. သေချာတော့မသိဘူး..)
ဘုရားပုံကိုမြင်ရတာ သန့်ရှင်းမှု၊ အေးချမ်းမှု၊ သစ်လွင်တောက်ပမှု၊ ခမ်းနားထည်ဝါမှု စသဖြင့် ခံစားချက်အစုံကို တပြိုင်နက်တည်း ရလိုက်ပါတယ် …
ဖုန်ထူ လွန်းတယ် မဝေေ၀ ရေ .. ညဘက် ကြမ်းတိုက်တာ … Battery ကား နဲ့ဗျ။ မိုက်ဒလယ်။
ပန်းတင်တော့ အလည်ခေါ်ချင်တယ် ဦးပေါက် ရေ.. ဒါပေသိ . မီးမရှိ ရေမရှိ နဲ့ လေပူတိုက် ဖုန်ထူလိုက် နဲ့ ဆိုတော့ အားနာတယ်ဗျာ။ နောက် နှစ်ပတ်လောက်မှာ နေပြည်တော် တစ်ခေါက် လာရဦးမယ်ဗျို့  … အဲအခါ ကျ ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။
ဘတို့ သတိရရင်လဲ ခေါ်ရောပေါ့ တူမောင်ရယ်
တူတော်မောင်ပြောတဲ့ ဘီယာဝိုင်းနဲ့ 60 သားကြက်တစ်ကောင် လောက်ဆို ဘတို့ နှစ်ယောက် တူမောင်ပြတဲ့ ပန်းတင် ရွာ အရှေ့ ဘက်စိုက်ခင်း သစ်ပင်အောက်မှာ အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်။ နော…….. ဘကြီးပေါက်
စေတီအတွင်းပိုင်းကို ရိုက်ထားတာ တော်တော်လှပါတယ်ဗျာ။
ဦးဘလက်ချော ရေ ကျေးဇူးပါဗျာ။ မီးရောင်လေးတွေနဲ့ ဆိုတော့ သူ့ဘာသာ သူကို လှနေတာဗျ။
ကိုMလုလင်ရေ အားပေးသွားတယ်ဗျာ။၂၀၀၆ တုန်းကရောက်ဖူးတယ်လေ။ဒါနဲ့ တော်တော်ပြောင်းလဲဆန်းသစ်နေပီဘဲ။
မှတ်ချက်။။နေပြည်တော်ဆိုသည်မှာ လူယုတ်ကြီးများ၏နေရာ………အဲလေ…မှားလို့ …..လူရုပ်ကြီးတွေရှိတယ်လေ။
အထင်ရှားဆုံးပြောင်းလဲတာကတော့ မြေဈေးတွေ တက်သွားတာပါပဲ။ အစ်ကိုရေ..
ကျွန်တော် အမှိုက်ကျုံးနေတုန်း ဓာတ်ပုံရိုက်သွားတာ
ရွာထဲက အကျော်ဒေးယ ဓာတ်ပုံဆြာကိုလုလင်ပဲကိုး
ကျေးဇူးပါဂျာ ဆရာ့ကျေးဇူးကြောင့် ကျနော် အွန်လိုင်းမှာ နာမည်ကြီးရချည်သေးရဲ့
ရင်တွင်းဖြစ်တို့ own creation ဒါရိုက်တာကြီးတွေ သဘောကျလို့ ကျနော့်ကို မင်းသားတင်ရိုက်၊ နာမည်ကြီးသွားရင် ဆရာ့ကို နေပြည်တော်မှာ ၀မ်းတေဘယ် လုပ်ပေးမယ်နော်..
ဂယ်လား ဟင်.. နေတာက လဲ ချင်းရွာနဲ့ နီးတယ်နော် တစ်ပြ လောက် လျှောက်လိုက် ရင် ရောက်တာ … ဒို့ ရွာစားကျော် အရိုက်ခံ ရပါစေဗျာ။ (မင်းသား အဖြစ်)
ဥူး လုလင်ဂျီး၊ ပုံဒွေလွှတ်ကောင်းဗျား။
ဒါကြောင့်၊ ဈေးထဲ မှာလူမရှိတာလား ဟင်။
ဈေးက နေပြည်တော် က သပြေကုန်း ဈေးပါဗျာ။ ရွာက ထပ်သွားရသေးတာ နာရီဝက် ပျော့ပျော့ လောက် မောင်းရသေးတယ်ဗျ။
” ပန်းတင် ရွာ က ရှေးအိမ်. နေပြည်တော် နဲ့ သာဝထိ ကြား ”
ဒီပုံလေးကို မြင်ရတော့ ဇာတိရွာက အေးချမ်းလှတဲ့ အမေ့အိမ်လေးကို ပြေးပြီး မြင်ယောင်မိတယ် …
” ပန်းတင် ရွာ အရှေ့ ဘက်စိုက်ခင်း မှာ ”
ဒီပုံလေးကတော့ နေဝင်ချိန် ပန်းချီကား တစ်ချပ်များလားပဲ ……………
ကျနော်လည်း အားပေးသွားပါတယ် Mလုလင် ရေ ……….
ပုံတွေ အားပေးသွားပါတယ်နော်။ အောက်ဆုံးပုံလေးက အတော်အသက်ဝင်တာပါ။ အညာရှုခင်းအနေနဲ့။
တော်သေးတာပေါ့ အဲ့လို ဈေးလေးလည်း ရှိနေသေးလို့။
အညာသား တပိုင်း ဖြစ်နေပါပြီဗျာ…
နေပြည်တော်ေ၇ာက်တုန်းက ဘု၇ားပုံကို ကိုယ်တိုင် စိတ်တိုင်းကျရိုက်ခဲ့ ပေမယ့် အခု ပုံ လောက်မကောင်းဘူး..ညပိုင်းစေတီပုံတော် က ပို သပ္ပါယ်တယ်နော်။
အကြိုက်ဆုံးက ..ပုံ(၁)နဲ့နောက် ဆုံးပုံပါဘဲ…..
နောက်ဆုံးပုံ က သဘာဝကျတဲ့ ကျေးလက် ရှုခင်းမို့ နေမင်းနဲ့ တော်တော် ပနံ၇တယ်…..
မန်းသူ ရေ … ကျွန်တော်က Tripod သုံးလို့အဲလို ပုံရတာပါ။ ကြိုက်တယ် ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော့
စေတီပုထိုးပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံတွေ
တွေ့ရတော့ … တစ်မျိုးပဲဗျ ..
ခပ်ပြတ်ပြတ် ပဲ ပြောမယ်။ ဒီ site မှာ ဓာတ်ပုံ တင်ဖြစ်တာ … ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူမိတယ်ဗျာ။ ရောင်းအားကောင်းလို့ပါတဲ့..။မန်းလေး သွားတုန်းကလဲ .. တည်းတဲ့ အိမ်နဲ့ အဲ့ လမ်းမှာ တစ်အိမ်ကို တစ်ပုံ .. တစ်ချို့ ဆို ပုံတွေ post အမျိုးမျိုးလိုက် ကိုဝယ်ကပ်ထားတာ။ ဘုန်းကံ ကိုကကြီးတာ။
ကျေးဇူးပါ တီတီ padonmar ရေ။ ထူးတာက …. အဲ့စိုက်ခင်းကျ လယ်မြေဖြစ်ပြီး ကျွန်တော် ဓာတ်ပုံ လှမ်းရိုက်တဲ့နေရာကျ သဲမြေ၊ ယာမြေ ဖြစ်နေတယ် ဗျ။ သဲကလဲ ပူတော့ လမ်းလျှောက်လို့ မကောင်းဘူး
သပြေကုန်း သန့်တာ ယုံပါပြီ ရှင့်။